Impikiswano iyaqhubeka, eKorea bafuna inkcazo malunga nokwehla kwe-iPhone | IPhone iindaba
Sineeveki ezininzi sinempikiswanoNgokukodwa okoko i-Apple igqibe kwelokuba yenze inyani ngokusesikweni, bekucutha ngokuzithandela ii-iPhones ngeebhetri ekuthiwa ziphelile.
Yile ndlela ke, ngakumbi nangakumbi amazwi egunya aqala ukukrwelela imeko engekho mgaqweni yalo msebenzi, nokuba zikhona iingcali ezixabisa le ntshukumo. Ngelixa bobabini iKhomishini yoNxibelelwano eKorea igqibe kwelokuba icele ngokusesikweni ingcaciso kwinkampani yeCupertino ngenkqubo yayo yokuhamba kancinci.
Ngokwe Korea Herald, eli ziko likarhulumente linxibelelane nenkampani yaseCupertino ngqo ukuze icele ulwazi malunga nalo mkhuba. Kodwa musa ukuphosa iintsimbi kubhabho okwangoku, kwaye yiyo loo nto Ukusuka kwiKhomishini bebenobubele ngokwaneleyo ukuba bazise ukuba "ukubuza ingcaciso" yeyona nto banokuthi bayenze kulo mbandela. Isiqhamo samagilebhisi ukuba oku kuya kusinceda ukuba sifunde imigca ngononophelo eyilwe liqela lonxibelelwano leApple ngenjongo yokuqonda imeko engummangaliso. Oko kukuthi, ngale ntshukumo yomzimba waseKorea abayi kukwazi ukuyiphelisa le nkqubo "yokhuseleko" kwinkqubo eqhubeka ngokuthe chu kwaye ibonakala icotha, ngaphandle kwento yokuba okwangoku ichaphazela kuphela ii-iPhone 6 kunye neemodeli zangaphambili .
Okwangoku, asinakukhetha ngaphandle kokujonga ukurhoxa kwindlela inkampani yaseCupertino eziphatha ngayo ebusweni balo mba ebonakala ngathi inesizathu esibonakalayo. Kodwa lo ayingombuzo, kodwa kutheni iApple ingazilinganiseli ekunikezeleni umsebenzisi ithuba phakathi kwezicwangciso ezininzi ezifunwa yi-iOS, okanye ngaphandle kokuya phambili, ukwazisa umsebenzisi ukuba ngocwangciso lokugcina amandla banokufumana okufanayo iziphumo (Nokuba kunyanzelwa umsebenzisi ukuba ayisebenzise). Kuba nangona sicinga ukuba uthixo wethu olungileyo usinika konke ukusebenza kwakhe, inyani ikude kwaphela.
[phuculaI-Apple ikhuphe ingxelo ichaza khawulezisa kunye nokunciphisa iindleko zotshintsho lwebhetri onokuzifunda LAPHA]
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Impikiswano iyaqhubeka, eKorea bafuna inkcazo malunga nokwehla kwe-iPhone
Into ekufuneka yenziwe nguApple kukukhupha isicatshulwa esikhubaza oku kuncipha kwaye sikwenze ngokuzithandela, kwaye ichaze ngokucacileyo ukuba kwenzeka ntoni xa yenziwe yasebenza. Yonke enye into sisizathu somhlawuli ongalunganga kunye nokuthoba ibhetri, isonka sanamhlanje nendlala yangomso: kwakamsinya nje xa beyeka ukunikezela ngotshintsho oluncitshisiweyo, siza kuphinda sisebenzise ii-iPhones ezinciphileyo ngeebhetri ezigugileyo ezitshintshayo ziya kubiza amadlelo ibiza kude kube ngoku.
Umahluko phakathi kwexesha phakathi kwe-iPhone 6s, enye inebhetri entsha kwaye enye ineminyaka emibini yimizuzu emi-5 ndicinga ukuba ndiyayikhumbula, ke oko akubonakali ngathi yinto enkulu.
IMicrosoft Edge ye-iOS iya kuhambelana nePassword kunye neLastPass
Inkampani yefashoni yase-Itali iphumelela umlo nxamnye neApple ngokusetyenziswa kwegama elithi "Steve Jobs"